“Muungaab” oo ka qeybgalay Xaflad xalay ka dhacday Degmada Yaaqshiid (Sawirro) – Radio Muqdisho
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayna ka wada qeyb galeen Madaxda gobolka Banaadir iyo marti sharaf kala duwan ayaa xalay lagu qabtay degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir.
Xafladda ayaa waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah bulshada degmada Yaaqshiid, Fanaaniin, barbaarta gaashaaman iyo fanaanka weyn ee Cabdala Yuusuf Hanuuniye kuwaasoo dhamaantood soo bandhigay murti lagu sagootinayey sanadkii tagay laguna soo dhaweynayey sanadkan cusub.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Jeneral Xasan “Muungaab” ayaa ku boorriyay bulshada in ay gacmaha is qabsadaan lana bixiyo canshuuraha bariga iyo tan D/Hoose .
Dadkii ka hadlay munaasabadda ayaa dhamaantood rajeeyay in sanadkan cusub uu noqdo midkii ummadda Soomaaliyeed u horseedi lahaa nabadgelyo iyo horumar.
Samsung iyo Apple ka dib,Ma taqaan shirkadda 3aad ee dhanka telefoonnada ugu horreysa?